tvOS 10.1 uye watchOS 3.1.1 yakaburitswa zviri pamutemo | Ndinobva mac
Masikati ano shanduro dzepamutemo dzakatoburitswa kune vese vashandisi ve iOS 10.2, watchOS 3.1.1 uye tvOS 10.1. Dzese idzi shanduro dzinowedzera nhau dzatakatombotaura nezvadzo mune dzese beta beta dzakaburitswa mumazuva ano.
Kuvandudzwa kwesisitimu kugadzikana, mukushandurwa kweshanduro, kugadzirisa bug uye kuiswa kweiyo nyowani Unicode 9 Emoji, iyo nyowani yeTV application yechizvarwa chechina Apple TV (chete muUS) kana Imwe Sign-On, iyo inobvumidza kunyoreswa kuburikidza neakaundi account kune anopfuura sevhisi. Ino nguva chii isu tanga tichishayikwa ndiyo vhezheni ye macOS Sierra 10.12.2, izvo zvingangodaro uye kana pasina maminitsi ekupedzisira nhau dzichazoburitswa mangwana Chipiri.
Muchiitiko cheIOS isu tine mamwe nhau anouya ari mafomu emapuraneti, zvinokanganisa meseji nevamwe, asi isu tinosiya izvi kune vatinoshanda navo kuActualidad iPhone. Apple inowanzo kuburitsa zvinyorwa zvitsva pasirese uye ndosaka iwe uchigona ikozvino kugadzirisa kune yazvino vhezheni inowanikwa chero kwauri. Iyo yega iyoyo mune yechizvarwa chechina Apple TV isu hatizokwanisa kunakidzwa neiyo nyowani TV app, asi zvakasara zvakafanana kune wese munhu.
Kugadziriswa kwemhosho mushanduro idzi ndihwo hwaro mushanduro idzi nyowani, zviri pachena kuti isu tinewo dzimwe nhau maererano nehurongwa, hupenyu hwebhatiri kana mashandisirwo, asi huwandu hweshanduro nyowani hwakavakirwa pakugadziriswa kwezvikanganiso. Tinotarisira vhezheni itsva yeMac mumaawa mashoma, saka ramba wakatarisana. Panguva ino isu tinokwanisa kugadzirisa zvese zvakasara zveApple idevice, rangarira izvo Usati wagadzirisa iyo Apple Tarisa iyo inofanirwa kugadzirisa iyo iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » tvOS 10.1 uye watchOS 3.1.1 yakaburitswa zviri pamutemo
Makore gumi apfuura kubva zvakabudirira 'Gamuchira Mac' mushandirapamwe
Tim Cook naLarry Page, pakati pevamwe, vachasangana naDonald Trump